भर्चुअल माया - अनुभव - साप्ताहिक
टेक्नोलोजीको विकासपछि अहिले हाम्रो मायाप्रेम पनि ‘भर्चुअल’ भएको छ । पत्रबाट पठाइने प्रेम अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पठाउन थालिएको छ । मेरो प्रेमीका बारेमा मसँग सञ्चारकर्मी एवं मेरा प्रशंसकहरूले धेरै पटक प्रश्न गरेका छन् । तपाईंको प्रेमी छ ? पहिले कसैसँग प्रेममा पर्नुभएको थियो ? जस्ता प्रश्नको ओइरो पहिले त निकै आउँथ्यो । अहिले केही कम भएको छ । सबैलाई मेरो जवाफ हुन्थ्यो— ‘कोही भए सबैभन्दा पहिले तपार्इंलाई नै बताउँछु ।’
मोबाइल एसएमएसमा त होइन, फेसबुकको इनबक्समा चाहिँ केही यस्ता म्या्सेज आउँछन्, जसले मलाई टाइमपास गर्न सजिलो हुन्छ । यति धेरै क्रेजी म्यासेज हुन्छन कि कुनै–कुनैले त झर्को नै लगाउँछन् । मलाई आउने त्यस्ता म्यासेजमा ‘मेरो बिहानी तिमीबाट सुरु होस्, अनि रात तिमीबाट अन्त्य’, ‘तिम्रो तस्बिर फेसबुकमा नहेरी कसरी बाँच्छु होला, भन त’ भन्ने खालका धेरै हुन्छन् । कविता, मुक्तक पठाउनेहरू पनि धेरै छन् ।
यसरी मलाई भर्चुअल माया गर्ने प्रशंसकहरूकै मायाका कारण त म यहाँसम्म आइपुगेकी छु । रिप्लाई त कमै गर्छु, तर दुई जना प्रशंसकको मायाको म्यासेजले गर्दा उनीहरूसँग भेट नै गरेँ । ती दुई युवती थिए । उनीहरू मलाई मीठा–मीठा म्यासेजहरू पठाइरहन्छन् । मेरा बारेमा कसैले नराम्रो भन्यो भने झगडा नै गर्दा रहेछन् । उनीहरूले ‘जीवनको एउटै मात्र सपना तपाईंलाई भेटनु’ भनेपछि मलाई पनि उनीहरूको माया लागेर आयो र भेटेँ । अहिले पनि उनीहरू मेरो सम्पर्कमा छन् । यो भर्चुअल दुनियाँको मायाले अहिले मलाई पनि लोभ्याएको छ । म पनि भर्चुअल मायामा डुबेकी छु ।